Isikhungo seBoston neSiboniso
I-united states EMassachusetts IBoston
by UDavid Kelly
Umhlangano omkhulu waseBoston nendawo yokuhlangana
Isikhungo seBoston neSiboniso seBoston sika-main centre yomhlangano. Itholakala esifundeni se-Seaport esakhiwe kabusha, esivumelana nesikhumulo sezindiza, imigwaqo emikhulu, kanye nemishayo eminingi nezindawo zokudlela eziseduze.
I-Boston Convention ne-Exhibition Centre yenzelwe imicimbi emikhulu neyincane futhi iseduze (ukuhamba okude noma ukuhamba amatekisi amancane) ukuya edolobheni laseBoston namahhotela okudlela.
I-Boston Convention kanye neMiboniso Yesikhungo inezinyawo ezingaphezu kuka-500,000 square yembukiso ehlukaniswe okungenani ukulungiswa okungu-10 okuhlukile.
Kukhona nezinyawo ezingu-160,000 zesikhala somhlangano, no-40,000 square foot square Grand Ballroom. Inkantolo yokudla izakhiwo ingahlala kuze kufike ku-700 futhi isakhiwo senzelwe ukuthi abantu abahambayo bakwazi ukuhamba ngokushesha ukusuka kolunye uhlangothi.
Isikhungo seBoston neSikhungo Sokuboniswa singasheshe sifinyelelwe ngemoto cishe cishe noma yikuphi iphuzu. Lesi sakhiwo sise-415 Summer Street esendaweni esanda kuthuthukiswa yaseSoort Port yaseBoston, ngasempumalanga.
Kusukela kuLogan Airport (noma Umzila 1A eNingizimu), abahambi bangathatha i-I-90 West ngeTed Williams Umhubhe ukuze baphume ku-25 (okuphawuliwe ngokuthi "iSouth Boston"). Jikela ngakwesokudla phezulu kwirempu ungene ku-Congress Street, bese uthatha okulandelayo ungene ku-"D" Street. Ngemuva nje komgwaqo, thatha elinye ilungelo ku-Summer Street.
Kusuka eNtshonalanga, thatha i-I-90 East ukuya ku-Exit 25 (ephawuliwe "South Boston"). Jikela ngakwesokudla ku-Congress Street, ngakwesokudla ku-"D" Street, futhi ungene ku-Summer Street.
Ukusuka eMpumalanga, abahambi bangathatha i-I-90 kuya ku-I-93 eningizimu, baphume 18. Thatha ngakwesobunxele ekukhanyeni kwesibili kwezemoto (okuphawuliwe ngokuthi "i-South Boston Bypass Road) bese ulandela cishe i-mile eyodwa. Jikela ngakwesokudla ku-Cypher Street nakwesobunxele ungene eWest Side Drive.
Kusuka eNyakatho, abahambi bangathatha i-I-93 South ukuya ku-Exit 20A ("iSiteshi saseNingizimu" esimakwe). Jikela ngakwesokunxele ekupheleni kwendlela efika e-Summer Street. Landela ihlobo ngebanga elilodwa.
Kusuka eNingizimu, abahambi bangathatha i-I-93 North ukuya ku-Exit 20 (ephawuliwe "South Boston") futhi balandele izimpawu ze-I-90 East. Thatha umzila wokuqala wokuphuma (imakethe "South Boston"). Jikela ngakwesokudla ekuqaleni kwezinto zokukhanyisa kwi-Congress Street, futhi okwesibili ungene ku-"D" Street. Ngemuva kwempambu, jikela ngakwesokudla ehlobo.
Isikhungo se-Boston Convention and Exhibition Centre sibuye sikwazi ukukhetha izindlela ezihlukahlukene zokuthutha zomphakathi.
Kusuka ku-Logan Airport, abahambi bangathatha i-Silver Line SL1 Bus bese bephuma e-World Trade Center Stop. Ukusuka lapho, thatha i-elevator kuze kube sezingeni 2, jikela ngakwesobunxele, futhi iBoston Convention ne-Exhibition Center kuyoba phambi kwakho.
Kusuka emigwaqweni yase-Amtrak ne-Commuter Rail, abahambi bangasuka eSitatimendeni saseSouth Station bahambe baye e-Summer Street. Jikela ngakwesokudla futhi uthathe itekisi noma uhambe (cishe i-kilomitha elilodwa ukuya eSikhumbuzweni saseBoston nesikhungo sokubukisa).
Kusuka e-Boston / T, abahambahamba bangathatha i-MBTA Red Line, baphume eSiteshini SaseNingizimu futhi bahambe (ngezinkomba ezingenhla) noma bathathe i-Silver Line SL1, SL2, noma i-SL3 esitokisini seWorld Trade Center ngenhla.
Isikhungo se-Boston Convention and Exhibition Centre siyatholakala futhi ngebhasi lomuzi. Okungenayo kwi # 7 (City Point kuya eSiteshini SaseNingizimu), shiya ku-415 Summer Street. Ukuphuma eSiteshini SaseSouth Station kuhamba ngo-425 Summer Street, uye ngakwesokudla, futhi uhambe isigamu se block.
Okumangalisa ukuthi iBoston Convention and Exhibition Centre nayo ingafinyelelwa ngesikebhe. Service City Taxi service phakathi kwe-Lovejoy Wharf eNyakatho Station kanye neWorld Trade Center (cishe ukuhamba ngomzuzu owodwa).
Ukukhethwa kokuqala kokupaka endaweni yeBoston Convention kanye ne-Exhibition Centre kufanele kube ukupaka izimoto. Inani lokupaka litholakala ngesikhathi semicimbi eminingi ye $ 25. Suka e-Summer Street ufike e-East Side Drive. Indawo ye-valet izoba ngakwesokudla futhi iyakwamukela ukheshi kanye namakhadi esikweletu.
Ngaphandle kwalokho, izivakashi zingakwazi ukupaka i $ 12 ngokuqhubeka nokudlulela endaweni ye-valet bese zilandela uhlangothi lwesakhiwo. Yenza ilungelo ekupheleni kwesakhiwo ukuze wehlele umgwaqo. Jikela ngakwesokunxele phansi kwempambu futhi ukungena kweNingizimu South lot lot kuyoba phambi kwakho.
Uma umcimbi oya kuwo ukhulu kakhulu, kungenzeka ukuthi amagaraji azofinyelela amandla okugcwele.
Uma kunjalo, ukupaka okungeziwe kuyatholakala eBoston Marine Industrial Park noma ezinkampanini ezizimele ngasempumalanga.
Kukhona ukupaka kwamamitha okulinganiselwe azungeze iBoston Convention Centre.
Ulahlekile futhi utholakale
Okumangalisa ukuthi ungabheka ukuthi yini etholakale e-Boston Convention kanye ne-Exhibition Center online kwi-Boston Convention and Exhibition Center Lost and Found page.
Izinto zigcinwe izinsuku ezingu-60. Ukuze uthole olunye ulwazi, xhumana noMnyango Wezokuphepha Womphakathi ngo-617-954-2222 noma u-617-954-2111 endaweni ye-Hynes.
Ukuze uthole izindawo zokuhlala eduze kwesikhungo somhlangano, thintana nalokhu okubukeziwe kwamahhotela e-Boston nge-Guide ka-About.com eya eNew England. Noma lawa mahhotela aphezulu aphezulu e-Boston, njengoba ahlonishwe Umhlahlandlela we-About.com ku-Amahhotela nezindawo zokuhlala.
Uma unezindiza zakuqala noma eziseduze futhi ufuna ukuhlala eduze nesikhumulo sezindiza, Umhlahlandlela we-About.com ku-New England uhlanganise lolu hlu lwamamahhotela eduze ne-Logan sezindiza .
Futhi ngakolunye uhlangothi lomdlalo, uma ungumuntu wezemidlalo, ungase uthande ukucabangela amahhotela eduze kwaseFenway Park .
I-Boston Convention & Isikhungo semibukiso (BCEC)
IBoston, MA 02210
Lapho Uzozwa I-jazz Ephilayo eBoston
Izindawo ezihamba phambili zeBoston Travel and izaphulelo
I-TD Garden: Umhlahlandlela Wokuhamba we-Game Celtics eBoston
I-Boston Marathon: Amathiphu Wokuhamba Wokuya Emncintiswaneni Omdala Omhlaba Omkhulu
Indlela Amabhangqwana Angaba Nayo Ukuzijabulisa eBoston
Ipaki kwi-Mass Pike futhi Thatha T kuya eBoston
Okudingeka Ukwazi Nge-SARS eHong Kong
Fall Fun at the Great Godfrey Maze
Umlando wezidonga zedolobha likaDerry
I-Santa Barbara Gay Pride 2016 - I-Pacific Pride Festival 2016
I-Alaska Railroad Grandview I-Train-Anchorage eya ku-Seward
Uhambo lwakho oluya eMinneapolis: I-Complete Guide
Thola Ukwazi Maricopa, e-Arizona
Izindawo zokudlela ezihamba phambili ze-Kid-Friendly ne-Lazy River
Izinsuku zamahhala nezinsuku zokubambisana ze-Memphis
5 I-Top India Motorcycle Tour Tour and Tours
U-Elmhurst e-Queens, NY: Iphrofayela yomakhelwane
Ulwazi olubalulekile mayelana nezindleko eYurophu
Ibhuloho laseBerlin lamaSpies